हामीले जे गरे पनि बाहिरको कसैले थाहा पाउने हैन - Wonder Ideas
हामीले जे गरे पनि बाहिरको कसैले थाहा पाउने हैन
साँझ सात बजे नै बुबाले एक कार्टुन बियर र दुई फुल भोड्का बोकेर आउनुभयो । रुबीनाले बियर लगेर फ्रिजमा राखि अनि किचनमा गई, आमा पहिलेदेखिनै किचनमै हुनुहुन्थ्यो । रुबीनाले सोकेसबाट केहि भोड्का ग्लास निकाली अनि कागतीलाई स्लाइस बनाउन थाली, आमाले केहि स्याउ र गाजर अनि काँक्रो काटेर सलाद बनाउनुभयो । सायद: खाना पाकिसकेको थियो, आमा र
रुबीना मिलेर भोड्का, ग्लास अनि सलाद र आईस ट्रेमा राखेर टि.भी. अगाडीको टि-टेबुलमा राखे । आमा र रुबीना दुवै जनाले यतिखेर प्लङ्ग लगाएको हुनाले हामीपट्टी फर्केर टि-टेबुलमा सामानहरु राख्दा आमा र रुबीना दुवैको बुब्स मजाले देखिएको थियो । तुलना गर्दा भर्खरै बढ्दै गरेका रुबीनाको बुब्स सानो भएपनि गुलाबी र कलिलो देखिएकोले मेरो लाँडो ठन्किसकेको थियो भने आमाको पोटिलो र भरिलो कालो निपलसहित हल्का झोल्लिएको बुब्स झनै आकर्षक देखिएको थियो । रुबीनाले चारवटै ग्लास लिएर आएकी हुनाले बुबाले चारवटै ग्लासमा भोड्का राख्नुभयो । पहिलोपटक घरमै बसेर हामी सबैले भोड्का खाएको यो पहिलो पटक थियो तर पनि आमाले बेलामौकामा हल्का टुच्च पार्नुहुन्थ्यो भन्ने थाहा थियो, रुबीनाले भने पहिलो पटकनै रक्सी मुखमा हाल्ने तयारीमा थिई र ऊ रक्सी पिउन तम्तयार भईसकेकी थिई ।
रुबीनाले सहि थाप्दै भनी “दादाले आज हामी सबैलाई झ्याप पार्ने बिचार गर्नुभए जस्तो छ ।“ त्यसपछाडी मैले सबैको अगाडी दुई दुई पत्ती तास बाँडे र आफ्नो तास पल्टाउँदै भने “लौ मेरो बासा र गुलाम आयो !” रुबीनाले पल्टाई र भनी “मेरो मिसी जुट परेछ ।“ आमाले पनि पल्टाउँदै भन्नुभयो “दहल र सत्ता !” बुबाको पालो आयो र बुबाले पनि तास पल्टाउँदै भन्नुभयो “थुक्क पञ्जा जुट परेछ ।“ “लौ बुबा हजुरले घ्याम्पे हान्नुस् ।“ बुबाले घ्याम्पे पार्दै फेरी सबैको अगाडी दुई दुई पत्ती तास राखिदिनुभयो । र बुबाले आफ्नो अगाडीको तास पल्टाउँदै भन्नुभयो “मिसी र गुलाम !” मैले आफ्नो तास पल्टाउँदै भनें “नहल र मिसी !” रुबीनाले पल्टाई र भनी “छि दुआ तिर्की !” अनि आमाले पनि पल्टाउँदै भन्नुभयो “झण्डैले परेको छक्का चौका !” रुबीनाको भोड्का पिउने पालो थियो, नाक थुनेर आँखा चिम गर्दै रुबीनाले एकसटमै
सकेर मुख बिगारेर एकछिनसम्म रन्थनिई अनि तास बाँड्न थाली । रुबीनाले तास बाँडिसकेपछी आफ्नो भागको तास पल्टाउँदै भनी “गुलाम र सत्ता !” आमाले पल्टाउँदै भन्नुभयो “छि दुआ जुट !” बुबाले पल्टाउँदै भन्नुभयो “दुआ पञ्जा !” र मेरो पालो आयो “अठ्ठा र तिर्की !” आमाले रन्थनिदै भोड्का सिनित्त पार्दै तास बाँड्न थाल्नुभयो, बुबाले तास पल्टाउँदै भन्नुभयो “बुढा बुढी !” मैले पनि तास पल्टाएर भनें “गुलाम एक्का !” रुबीनाले तास पल्टाई र भनी “ह्या तिर्की चौका ! नाई दादा अरु कुनै बाजी गरौं न म कहिले पनि नपिएको मान्छे त एकैछिनमा सेन्टिफ्ल्याट भईहाल्छु नि !” मलाई त माहौल बनाउनु थियो “त्यसोभए यसैमा स्ट्रिप-पोकर खेलौं न त ?” आमाले भन्नुभयो “कसरी खेल्ने हो फेरी ?” मैले आमालाई जवाफ दिदैं भनें “हामी सबैको शरिरमा बराबरी कपडा हुनुपर्छ जस्तो कि मैले शर्ट पेन्ट अनि भेष्ट र अण्डिज लगाको छु भने रुबीनाले पनि ब्रा अथवा समिज, शर्ट अथवा टि-शर्ट, पेन्टी अनि फ्रक अथवा स्कर्ट वा तेस्तै !”
रुबीनाले उक्सिदैं भनी “हुन्छ हुन्छ ! आमा ल जानु दादाले भने जस्तै गरि चारवटा कपडा लगाएर आउनुस् म पनि लगाएर आईहाल्छू बुबाले पनि चारवटै लगाउनु भएको जस्तो छ ।“ त्यसपछी आमा र रुबीना आफ्नो आफ्नो कोठामा लागे, त्यतिञ्जेल मैले आफ्नो भागको भोड्का सिनित्त पारें । एकैछिनमा रुबीनाले ब्रा पेन्टी सहित टि-शर्ट र स्कर्ट लगाएर आई भने आमाले ब्रा पेन्टी सहित शर्ट र लेगिन्स लगाएर आउनुभयो । त्यसपछी मैले एक-एकवटा तास सबैको अगाडी राख्दै भनें “जस्को सानो आउँछ उसले खेल सुरु गर्छ र त्यसपछी जसको सबैभन्दा सानो तास हुन्छ उसले आफ्नो शरिरबाट कम प्राथमिकताको एउटा कपडा उतार्नुपर्दछ । जब कसैको शरिरबाट पुरै कपडा अलग हुन्छ
उसलाई सजायस्वरुप कुनै काम गराउन पाउँछ । सम्झनुपर्ने कुरा के भने जित्नेले कपडा फेरी लगाउन पाउँदैन नि ?” आमाले प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो “छ्या यस्तो पनि कहिं खेल हुन्छ ?” तर बुबाले आमालाई कानमा खुसुक्क भन्नुभयो “हेर ! तिमी र महेन्द्रको बारेमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ, महेन्द्रले रुबीना र मेरो बिचको कुरा पनि भनेकै होला ? यो त जस्ट सबैजना घुलमिल हुने सजिलो प्लान मात्रै बनाएको हो महेन्द्रले ! मुल उद्देश्य त सेक्स पार्टी नै हो त्यही भएर मानेजस्तो गर !” र मतिर हेरेर मुस्काउनुभयो । मैले पनि थप्दै भनें “हामी बिचमा के को लाजसरम हो र ? रमाईलोको लागि पो खेलौं भनेको त आमा ?” रुबीनाले पनि हो मा हो थप्दै भनी “आमा पनि ! खेल्नुस् न कस्को भाग्यमा के छ के छ ? के थाहा हजुरले पो जित्नुहुन्छ कि ?” आमाले पनि लोकाचार पार्दै भन्नुभयो “अब सबै जनाले खेलुम् भनेपछी म मात्रै के एकलकाटे हुनु र ?
लौ सुरु गरुम् तेसोभए ।“ हामीले आफ्नो अगाडी भएको तास एकैपटक पल्टायौं र आमाको भागमा तास बाँड्ने जिम्मा आईपर्*यो, रुबीनाले आमालाई उक्साउँदै भनी “लौ हेर्नुस् आमा ! आज तपाईकै जित होला जस्तो छ है ?” बुबाले ग्लासमा भोड्का र आईस थप्दै भन्नुभयो “यतापनि बिस्तारै चुस्की मार्न नबिर्सने नि ?” लगातार मैले दुई पटक हारें र शर्ट र भेष्ट उतारें, त्यसपछी रुबीनाले हारी र रुबीनाले बडो चलाखिपूर्ण तरिकाले आफ्नो ब्रा उतारी, बुबाले पनि आफ्नो शर्ट उतार्नुभयो, फेरी रुबीना परी र उसले फेरी पनि चलाखिपूर्ण तरिकाले आफ्नो पेन्टी उतारी र भनी “वाउ ! आज आमालाई राम्रै लोटरी लाग्या जस्तो छ !” फेरी बुबाले आफ्नो भेष्ट उतार्नुभयो र मेरो पालो
आयो र मैले पेन्ट पनि उतारें र बुबाको पनि पेन्ट उतारियो, आमाको हरेक पटक ठुलो कार्डले गर्दा केहि उतार्नुपरेको थिएन । बुबा र मेरो लाँडो ठन्किएको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो । यसपटक लगातार दुईपटक आमाको कार्ड सानो आयो र रुबीनाले झैं आमाले पनि चलाखिपूर्ण तरिकाले ब्रा उतार्नुभयो तर लेगिन्सका कारणले आमाले लेगिन्सनै उतार्नुपर्ने बाध्यता भयो । लेगिन्सनै उतारे पनि आमाको शर्टले कमरमुनिको भाग छोप्न सफल भएको थियो । अब हामी बाउ छोरा मात्र अण्डरवेयरमा थियौं भने रुबीना टि-शर्ट र स्कर्टमा अनि आमा चाँही शर्ट र पेन्टीमा हुनुहुन्थ्यो । संयोगले आमा नै फेरी पर्नुभयो र आमाले पेन्टी उतार्नुभयो, तर शर्टका कारण आमा अझै सहज परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । रुबीनाको पालो परेपछी रुबीनाले उल्टोपट्टी फर्केर टि-शर्ट उतारी र हातले बुब्सलाई कबर गर्दै बसी ।
अब हामी सबैको शरिरमा एक-एक वटा मात्र कपडा बाँकी थियो र रुबीनाले फेरी पेन्टी उतार्नुपर्ने भयो र पछाडी फर्केर रुबीनाले आफ्नो पेन्टी उतारेर एउटा हत्केलाले पुती छोप्दै अर्को हातले अघीको जसरी नै बुब्स छोपेर बस्दै भनी “लौ म आउट भएँ है ?” “आउट भएपनि एउटा अप्सन छ रुबीना ?” “के दादा !” “हार्नेले जित्नेको डिमाण्ड फुलफिल गर्ने ?” “डिमाण्ड जे पायो त्यही भयो भने नि ?” “त्यसको पनि अप्सन छ, डिमाण्ड असेप्ट भएमात्र गेम खेल्ने नभए ज-जसले असेप्ट गर्छ खेल्ने नगर्नेले नखेल्ने !” रुबीनाले मुखबाट सहजै आवाज निकाली “अब देख्न पाईन्छ गन्दी बात ! साँच्चै सब अप्सन मानेर गेम खेल्नुपर्ला जस्तो छ के बिचार छ आमा ?” बुबाले ऐन मौकामा आमालाई सजिलो बनाइदिनु भयो “हामी यहाँ चारजनामात्रै छौं सहमतिमा हामीले जे गरे पनि बाहिरको कसैले थाहा पाउने हैन… किन हिच्किचाएको !” रुबीनाले फेरी थपी “लौ
आमा हामी चारैजना त हो नि यहाँको गोप्य कुरा अरुलाई किन भन्नुपर्*या छ र ? खेलौं है ?” आमाले पनि “मैले केहि भनेकै छैन मलाई किन बिचमा घसिटेको… मन नपरे मन परेन भनिहाल्छु नि ? बाँड महेन्द्र !” मैले तास बाँडे र म आफैं हारें अनि मैले अण्डिज खोल्दै भनें “रुबीना र म बराबरीमा छौं, अनि बुबा र आमा पनि एक-एकको बराबरीमै हुनुहुन्छ है !” रुबीनाले तास बाँडी र आमालाई नङ्ग्याईदिई, रुबीनाले झै आमाले पनि एक हातले पुती र अर्को हातले बुब्स छोप्नुभयो, यता रुबीना भने तास बाँड्ने निँहुमा केहि पनि नछोपी उभिएकी थिई । रुबीनाले फेरी तास बाँडी र मलाई हराई, यसपटक पनि रुबीनाले जितेकी थिई, मैले रुबीनालाई भनें “के छ त तेरो डिमाण्ड ?” “छन त के के छ के के नि ? अहिले चाँही हजुरले भोड्का पिउनुस् – घ्यामपे !”
त्यसपछी रुबीनाले फेरी तास बाँडि र आफैं हारी, मैले जितेकोले मैले रुबीनासँग डिमाण्ड गरें “लौ रुबीना तैले बुब्स मजाले खेलाएर आफ्नै मुखले चुसेर देखाई !” मैले भनेजस्तै गरि रुबीनाले आफ्नो बुब्सलाई मुठ्ठीमा लिएर केहिबेरसम्म निचोर्दै मुखले सक्दो चुस्ने कोसिस गरि तर सानो भएको कारणले सम्भव भएन । मैले बाँडेको तासमा आमाले हार्नुभयो र मैले आमालाई भनें “अब आमाले के गर्नुहुन्छ त ?” अनि उठेर लाँडो मुसार्दै आमाको पछाडी पुगें, हामी सबै झ्याप हुन थालिसकेका थियौं, त्यहाँभरीमा कम पिउने म मात्र नै थिएँ । मैले आमालाई पछाडीबाट समातेर भनें “झ्याप पनि भईयो गेममा पनि खासै मजा आएन !” अनि आमालाई उचालेर कार्पेटमा सुताउँदै आमाको टाङ्ग फट्याएर भनें “तै पनि मेरो लाँडो त हजुरको पुतीमा छिर्छु भन्दैछ !” आमाको पुतीमा ठन्केको लाँडो छिराउँदा भने
आमाले हल्कासँग सित्कार छोड्नुभयो र मैले फास्टट्रयाकमा आमालाई निकैबेरसम्म धक्का मारें, बुबा र रुबीना हामीलाई हेर्दै थिए, त्यो देखेर मैले भनें “बुबाले के हेरिरा नि आउनु आमाको मुखमा लाँडो चुसाउनुस्, आज आमालाई जवानी याद दिलाउने हो….?” त्यसपछी रुबीनाले बुबाको अण्डरवेयरबाट लाँडो निकालेर खेलाउँदै आमा पल्टिएको ठाउँमा ल्याउँदै भनी “हजुरको स्वास्नीलाई हजुरको छोरोले चिकिरा’छ भनेपछी… हजुर पनि मलाई चिक्नुस् न !” अनि आमाको मुखनिर लाँडोको छाला फर्काएर आफैंले चुस्न सुरु गरि ।
रुबीनाले बुबाको लाँडो चुस्दा बुबाको अण्डकोष आमाको मुखमै झोल्लिएर छुँदै थियो, मैले आमालाई उक्साउँदै भनें “आमा चुस्नुस् न बुबाको गेडा ! तपाईंकै बुढाको माल त हो नि ! निर्धक्कले चुस्नुस् !” आमाले पनि सहजै बुबाको गेडालाई केहिबेर चुसेर खेलाउँदै भन्नुभयो, “बाउ-छोरा मिलेर मलाई चिकेर रण्डी बनाउने भए !” रुबीनाले पनि आमाको पोका खेलाईदिदैं भनी “रण्डीको छोरी त झन रण्डी नै हुने भई हाली… हैन त आमा ?” बुबाले भन्नुभयो “घरभित्र जे भनेपनि भनो तिमरु आमा-छोरीले जतिखेर मन लाग्छ पुती थापेर चिकाए हुन्छ ! तर बाहिर जाँदा चाँही यो सब कुरा बिर्सनु पर्छ नि बाहिर त हामी परिवारका सदस्य हौं ! अरुले हाम्रो लाँडो पुतीको सम्बन्ध थाहा पाए भने बर्बादै हुन्छ नि ?
अनि घर पुगेपक्षि मैले उसको आखा बन्ध्ये
मैले हिजो सम्म सोझि र प्यरि सोचेय् कि मेरि बहिनि – भाग २
उनको पर्फ्युमको बास्ना मेरो कोठासम्म आइपुग्थ्यो
सावित्री घरमा एक्लै हुँदा सधैजसो यस्तै सोच्न थालेकी छे
मलाई सोह्र बर्षे जवानी फर्केर पो आयो – भाग २
बिस्तारै बिस्तारै साथिको बुडि सङ गाफ हुन थाल्यो